အင်္ဂလိပ်သီချင်းခွေအတွက် ဆွီဒင်နိုင်ငံ၊ စတော့ဟုမ်းမြို့မှာ သွားရောက်အသံသွင်းခဲ့တဲ့ အဆိုတော် Ar.T - Popular
အင်္ဂလိပ်လိုချည်းပဲ သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းခွေ ၂ ခွေကို အဆိုတော် ဟန်ထူးလွင်(ကျားပေါက်)နဲ့ အတူ ဆွီဒင်နိုင်ငံ၊ စတော့ ဟုမ်းမြို့မှာ အသံသွင်းခဲ့ကြောင်း အဆိုတော် Ar.T က ပြောပါ တယ်။ နိုင်ငံတကာ ကို ထိုးဖောက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီး ကြိုးစားနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်းပြောတဲ့ Ar.Tက ….
“ကိုကျားပေါက်တစ်ခွေ၊ ကျွန်တော်တစ်ခွေပေါ့။ အဲဒါ ထွက်ဖို့ရှိတယ်။ ပရိုဂျူဆာက FG ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ အဲဒီ ၂ ခွေစလုံးကို ဆွီဒင်နိုင်ငံ၊ စတော့ဟုမ်းမြို့မှာ အသံသွင်းခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခွေလုံး အင်္ဂလိပ်လို သီဆိုထားတာပေါ့။ မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီး တော့မှ အင်တာနေရှင်နယ်ကို ထွက်ရှိနိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ကိုကျားပေါက်အခွေက ပြီးနေ ပါပြီ။ ကျွန်တော်ကတော့Mixing ဆွဲတဲ့ အဆင့်ရောက်နေပါပြီ” လို့ ပြောပါတယ်။
ဆွီဒင်မှာ သီချင်း ၇ပုဒ်ကို ၁ဝ ရက် တည်းနဲ့ အပြီးဖန်တီးခဲ့တဲ့ Ar.T က သူများနိုင်ငံတွေမှာတော့ အချိန်ဆွဲ မနေဘဲ တစ်နေ့တည်းနဲ့ သီချင်းရေး၊ အသံသွင်း၊ အချောသီဆိုတာတွေပြု လုပ်ရတာက သူ့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ ဟန်ထူးလွင်လို Artist အ မျိုးနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာက ကိုယ့်အတွက် ဘယ်လိုအကျိုးတွေဖြစ်စေလဲ၊ အတွေ့ အကြုံလေးတွေကို ပြန်ပြောပြပါလားလို့ ဆိုတော့ ….
“ကျွန်တော့် ဆရာက J.me ပေါ့နော်။ ကိုကျားပေါက်ကလည်း ကျွန်တော့်ဆရာလိုပဲ။ နှစ် ယောက် စလုံးကို ကျွန်တော်အလွန်ကြောက်တယ်။ သူတို့က စည်းကမ်းလည်းကြီးတယ်။ ကိုကျားရှေ့မှာဆို သီချင်း မဆိုရဲလောက်အောင်ကြောက်တယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဟိုမှာကတော့ ညီအစ်ကိုတွေလိုပဲ အတူ တူနေပြီးတော့မှ ကိုကျားက ကျွန်တော့်ကို Guide လုပ် ပေးတယ်။ သင်ပေးတယ်။ ရှေ့ကနေ ဦးဆောင်လမ်း ပြပေးတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့R&B ဘက်ကိုသွား တဲ့ဟာမျိုးကျရင် ကိုကျားက ဆိုပေါက်တွေကအစ သင်ပေးတယ်။ ဆွီဒင်က ပရိုဂျူဆာတွေရေးပေးတဲ့ သီချင်းတောင် ကျွန်တော်အဲဒီလောက် ဖိအားမများ ဘူး။ ကိုကျားပေါက် ရေးပေးတဲ့သီချင်းကျတော့ ကျွန်တော် အမှားအယွင်းပါမှာ အလွန်ကြောက်တယ်။ အဲဒီတော့ နောက်ဆုံးမှ ဆိုတယ်။ ကြောက်လည်း တအားကြောက်တယ်” လို့ Ar.T ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ Ar.T က ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာ ခါတိုင်းနှစ်တွေနဲ့ မတူတဲ့ Presentation တစ်ခုကို ချပြဖို့ ကြိုးစားနေကြောင်းလည်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ ဘယ်ကိုပဲ သွားသွား မန္တလေးကိုတော့ ပိုချစ်တယ် ဆိုတဲ့ Ashwarya Kumar 35 views